Ime anwansị na -eji beads - Ọdịdị dị mfe na nke mbụ | Arụrụ aka na -aga
Ime anwansị na -eji beads
Alicia tomero | | Crafts, Ebube carnival, Crafts maka ụmụaka
Were nkeji ole na ole mee ka ihe ndị a dị oke ọnụ ahịa Wkwà ji ụcha chara acha mee Hama Kpụrụkpụrụ Ọlamma na Osisi Kpụrụkpụrụ Ọlamma na -egbuke egbuke agba. Ị nwere ike ịme ha ka gị na ụmụ gị mee ka ha wee soro ha gwuo egwu. Ha dị mfe ma dị egwu ma dịkwa mma iji ejiji.
1 Ihe m ji mee mgbaasị anwansi abụọ:
Ihe m ji mee mgbaasị anwansi abụọ:
Igwe na -akpụzi ma dịkwa ike maka ọrụ aka
Mkpụrụ osisi Hama. Azụrụ m ha ọnụ, yana ngwakọta nke ụcha dị nro
Obere osisi chaplet nwere agba siri ike
Mpekere 2 nke ndị na -asacha ọkpọkọ, otu pink na otu oroma
Anyị na-a ibe waya anyị na -enye ya ọdịdị kwụ ọtọ ma n'otu akụkụ anyị na -ehulata ya Gburugburu udi.
Anyị malitere itinye bekee hama n'ime eriri ogologo. Na trinket ikpeazụ anyị jiri ya mechie ya a dobe nke silicone na -ekpo ọkụ ka mkpụrụ ndụ agaghị agbanwe ma ọ bụ pụta.
N'akụkụ gbara gburugburu anyị na -etinye beads Hama Kpụrụkpụrụ Ọlamma na osisi. Iji malite, anyị na -etinye otu osisi na Hama beads abụọ. Anyị na -agbanwe ha ọzọ ruo mgbe anyị gụchara gburugburu. Iji mechaa anyị tinyekwara a dobe nke silicone na -ekpo ọkụ iji mechie njedebe. Anyị hapụrụ ya nkụ.
Anyị na -atụgharị akụkụ ahụ niile dị n'elu na mkpanaka nke wand ahụ. Anyị ga -esonyere ya ka anyị wee nwee ọdịdị nke wand maka nke a anyị ga -esonyere ya ụfọdụ silicone na -ekpo ọkụ.
Anyị na -ewere waya ọzọ wee hapụ ya ozugbo. Anyị tinye a Ọmarịcha Hama Beads anyị na -emechi ya na ngwụcha waya ka ọ ghara ịpụ. Anyị na -ahapụ ka nkụ wee gaa n'ihu na -etinye Hama Kpụrụkpụrụ Ọlamma, na -ejikọ ya na chaplet osisi. N'ikpeazụ anyị ga -eji akara mechie njedebe nke ọzọ silicone na -ekpo ọkụ.
Anyị na -ewere ha abụọ ibe n'ibe ndị na -ehicha ọkpọkọ. Ha ga -abụ otu ogologo. Anyị ga -ekekọta ha ka ha abụọ wee nwee ike mepụta obi. Anyị ga -ejikọ ha na obere silicone dị ọkụ wee hapụ ya ka ọ kpọọ nkụ. Ozugbo anyị kpọrọ nkụ udi obi anyị ga -ejikọkwa ya na mkpanaka site na ịtụba nke ahụ silicone glob. Hapụ ya ka anyị kpọnwụọ, anyị ga -edozikwa mkpara anwansi anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » Ime anwansị na -eji beads
Arụrụ aka ise iji chọọ gburugburu ụdị boho mma
Set nke hoops maka ụmụaka